Guddiga hirgelinta doorashada oo qorshahooda u gudbinaya Madaxda Madasha Wada-tashiga qaran – STAR FM SOMALIA
Guddigan oo uu madax u yahay Avv. Cumar Dhagey oo ah La Taliyaha Madaxweynaha ayaa maalmihii u dambeeyay kulamo la lahaa xubnaha Beesha Caalamka, iyagoo u gudbiyay qorshayaashooda la xiriira taaba gelinta doorashada iyo xeerarka ay saldhiga uga dhigayaan doorashooyinka dhici doono.
Wararka ayaa sheegaya in Guddigan ay hor-geyn doonaan shirka Madasha Wada-tashiga qaran codsi ku aadan in labo bil dib loo dhigo doorashada, maadaama xilliga la heysto uu aad u yar yahay.
Guddigan ayaa shir todobaadkii hore ay la qaateen Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Danjire Micheal Keating u gudbiyay qorshahooda ugu dambeeya doorashada iyo suurta galnimada in doorashada la qaban doono in waqtigeeda dib uga dhacdo.
Inkastoo Madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku adkeysanayaan in doorashada ay dhici doonto waqtigii loogu tala galay, hadana waxaa jira calaamado muujinaya in doorashada ay dib uga dhici karto waqtigeeda, maadaama howlihii la qaban lahaa ay dib u dhacyo ku yimaadeen, gaar ahaan jadwalkii horay loo soo gudbiyay oo aan haba yaraate waxba laga qaban.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ka cabsi qaba in doorashada ay waqtigeeda dib uga dhacdo, isla markaana ay timaado marnaan xaga maamulka dowliga ah, maadaama madaxda talada heysa xilkooda ku eg yahay 10-ka bisha September.
Si kastaba ha ahaatee shirka Madasha Wada-tashiga Qaran ee Hoggaamiyeyaasha dowladda Dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa la filayaa in go’aano kale oo ku saabsan doorashooyinka ay ka soo baxaan.
Maxkamad ku taal dalka Britain oo xukun ku riday Wiil Somaliyed oo Daacish ku biiri rabay(Daawo Sawirada)